Kuiswa Linear Flora yakafuridzirwa nehuwandu "vatatu" kubva bougainvillea, ruva rePingtung County. Kunze kwematatu matatu e-bougainvillea anoonekwa kubva pasi pechinyorwa, kusiyanisa uye kuwanda kweatatu kunogona kuve kwakaratidzwa mumhando dzakasiyana. Kupemberera kusvitsa makore makumi matatu emutambo weTaiwan Lantern festival, Taa dhizaini dhizaina Ray Teng Pai akakokwa neCultural Affairs department rePingtung County kuti vagadzire mwenje usingaverengeki, musanganiswa wakasarudzika wefomu uye hunyanzvi, kutumira meseji yekushandura nhaka yemutambo. uye kuibatanidza neramangwana.
Muvhuro 8 Kukadzi 2021
Ambient Light 25 Nano chishandiso chechiedza kumiririra ephemeral uye chisingagumi, kuberekwa uye kufa. Kusevenza neDziva rePuru dziva Girazi CO,,, iyo yekuona iri kuvaka girazi rekudzokorora chigadziro chemangwana ramangwana rakajeka, 25 Nano akasarudza bubble risingaperi sepakati nepakati pakasiyana negirazi rakasimba kuti risanganise pfungwa. Mune chiridzwa, mwenje unopenya kuburikidza nehupenyu hupenyu hwekutenderera, kubatidza muraraungu-kunge ruvara nemimvuri kune zvakatipoteredza, kugadzira kurota kwemhepo yakapoterera mushandisi.
Task Task Iyohubhu yekukotama nzira ye Linear Mwenje inoshandiswa zvakanyanya kugadzira zvikamu zvemotokari. Iyo fluid angular mutsara inoonekwa nekunyatso kutonga kweTaiwan kugadzira, nekudaro iine hushoma zvinyorwa zvekugadzira iyo Linear Mwenje mwenje-uremu, yakasimba, uye inotakurika; yakanaka kuvhenekera chero zvemazuva ano zvemukati. Izvo zvinoshanda flicker-isina kubata kudimbuka LED machipi, neyemusoro basa rinotenderera pane rakapfuura raiswa vhoriyamu. Linear Task yakagadzirirwa kuunganidzwa zviri nyore nemushandisi, inoumbwa nezvisina-chepfu zvinhu uye inouya nefuraturu-kurongedza; kuita kwayo kwazvo kuderedza zvakatipoteredza.
Mugovera 6 Kukadzi 2021
Nzvimbo Yekushandira Dava yakagadzirirwa kuvhurika nzvimbo mahofisi, zvikoro nemayunivhesiti uko kwakanyarara uye kwakanyatsorongwa zvikamu zvebasa zvakakosha. Iwo ma modules anoderedza acoustic uye zvinovhiringidza zvekuona. Nekuda kwechimiro chayo chetatu, fenicha yacho inoshanda zvakanaka uye inobvumira nzira dzakasiyana siyana dzekuronga. Zvishandiso zveDava zviri WPC uye mvere dzakarukwa, zvese zviri biodegradable. Iyo plug-in system inogadzirisa madziro maviri kubhebhu uye inosimbisa kusagadzikana mukugadzira uye kubata.
Chishanu 5 Kukadzi 2021
Fenicha Yakachena Mhoro Wood akagadzira mutsara wekunze fenicha neakachenjera mabasa enzvimbo nharaunda. Kufunga zvekare rudzi rwemidziyo yeveruzhinji, ivo vakagadzira zvisingaite zvekuita uye zvinoshanda, zvichiratidza chigadzirwa chekuvhenekesa uye USB kuburitsa, izvo zvaida kuti zvibatanidzwe nemapaneru e solar nemabhatiri. Iyo Nyoka chimiro chakafanana; zvinhu zvaro zvinoshanduka kuti zvienderane newekupiwa nzvimbo. Iyo Fluid Cube ndeye yakagadziriswa unit ine girazi kumusoro ine maseru ezuva. Iyo studio inotenda kuti chinangwa chechimiro ndechekushandura zvinyorwa zvekushandiswa kwemazuva ese kuita zvinhu zvine rudo.
China 4 Kukadzi 2021
Tafura Yekudyira Iyo Augusta inodudzira iyo yakasarudzika tafura yekudyira. Kumiririra zvizvarwa zvakatitangira, dhizaini inoita senge inokura kubva pamidzi isingaonekwe. Makumbo etafura akatenderedzwa kune ino yakajairika musingi, inosvika kumusoro kuti ibate bhuku-rakafanana netapuro. Solid European walnut huni hwakasarudzwa nekuda kwezvinoreva huchenjeri uye kukura. Wood inowanzoraswa nevanogadzira fanicha inoshandiswa kune matambudziko ayo kushanda nawo. Mapfundo, makanga, mhepo inodedera uye mapfumo akasarudzika anotaurira nyaya yehupenyu hwemuti. Iko kusarudzika kwehuni kunobvumira iyi nyaya kuti igare pane imwe chidimbu chemhuri heirloom fenicha.
Prisma Inotakurika Ultraw Paturu Yekuongorora Chishanu 5 Kurume
Baan Chikafu Chemanheru Chakaiswa Kabhodhi China 4 Kurume
LOTUS Imba Yekugezera Chitatu 3 Kurume
Kuiswa Ambient Light Task Task Nzvimbo Yekushandira Fenicha Yakachena Tafura Yekudyira